(၉) ကွိမျမွောကျ နိုငျငံတကာလုံခွုံရေးဆိုငျရာညီလာခံ(MCIS-2021) ဖှငျ့ပှဲ အခမျးအနားကငျြးပ၊ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တကျရောကျ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
(၉)ကွိမျမွောကျနိုငျငံတကာလုံခွုံရေးဆိုငျရာညီလာခံ (Moscow Conference on International Security-2021(MCIS-2021)) ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို ယနဒေ့သေစံတျောခြိနျ နံနကျပိုငျးတှငျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ မျောစကိုမွို့ရှိ RADISSON Hotel ၌ ကငျြးပပွုလုပျရာ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ပါဝငျတကျရောကျ သညျ။
ဦးစှာ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျနှငျ့ ညီလာခံသို့ တကျရောကျလာကွသူမြားက Rosoboronexport ကုမ်ပဏီ နှငျ့ အခွားကုမ်ပဏီမြားမှ ခငျးကငျြးပွသထားသညျ့ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ စဈလကျနကျ ပစ်စညျးမြားအား လလေ့ာကွညျ့ရှုကွသညျ။
ညီလာခံအား စတငျကငျြးပပွုလုပျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသမ်မတ Vladimir Putin ပွောကွားသညျ့ (၉)ကွိမျ မွောကျနိုငျငံတကာလုံခွုံရေးဆိုငျရာညီလာခံ (Moscow Conference on International Security-2021(MCIS-2021)) အမှာစကား video ကို ဖှငျ့လှဈပွသသညျ။ ယငျးနောကျ ကာကှယျရေးဝနျကွီးက အဖှငျ့အမှာစကား ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ရုရှား ဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး Colonel General Alexander V.Fomin ကဦးဆောငျဆှေးနှေးပွီး ရုရှားဖကျဒရေး ရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနမှ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး Army General Valery GERASIMOV၊ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံမှ Colonel General WEI FENGHE၊ ကာတာနိုငျငံမှ Deputy Prime Minister and Minister of Denfece ဖွဈသူ Dr.Khalid Bin Mohammad AL-ATTIYAH၊ ဘီလာရုဈနိုငျငံမှ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Viktor KHRENIN၊ President of the international Committee of the Red Cross ဖွဈသူ Peter MAURER၊ အာဖဂနျ နစ်စတနျနိုငျငံမှ သမ်မတဟောငျး Khamid KARZAI တို့က သကျဆိုငျရာ ခေါငျးစဉျ မြားအလိုကျ၊ ကဏ်ဍ အလိုကျ ဆှေးနှေးကွပွီး ညီလာခံ မတကျ ရောကျနိုငျသူမြားက Online မှ တဈဆငျ့ ပါဝငျဆှေးနှေးကွသညျ။
ထို့နောကျ ညီလာခံအား အစီအစဉျအတိုငျး ဆကျလကျပွုလုပျရာ ဒုတိယပိုငျး မကျြနှာစုံညီအစညျးအဝေးတှငျ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက“ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေး အခွအေနတှေငျ အာရှ-ပစိဖိတျ ဒသေ အရေး အား ဆှေးနှေးခွငျး(The Asia-Pacific Region in the Context of Global Politics)” ခေါငျးစဉျဖွငျ့ ဆှေးနှေးသညျ။
ဆကျလကျပွီး မျောဒိုကျနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ဒုတိယကာကှယျရေး ဝနျကွီး Mr. Hassan ZAMEEL၊ ဗီယကျနမျနိုငျငံအမြိုးသားကာကှယျရေး ဝနျကွီး Senior Lieutenant General PHAN VAN GIANG၊ ဘင်ျဂလားဒရှေ့ျ့နိုငျငံ ဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဖွဈသူ H.E. Sheikh AASINA၊ ဘရူနိုငျးဒါရူဆလမျနိုငျငံမှ ကာ ကှယျရေးဝနျကွီး Mr. Halbi YUSSOF တို့က သကျဆိုငျရာခေါငျးစဉျမြားအလိုကျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျးနှငျ့ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေး ကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ၏ ဆှေးနှေးမှုနှငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေး ဝနျကွီးဌာန၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြတို့အား သီးခွားဆကျလကျဖျောပွသှားမညျ ဖွဈသညျ။
(၉) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ(MCIS-2021) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်
(၉)ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ (Moscow Conference on International Security-2021(MCIS-2021)) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ဒေသ စံ တော်ချိန် နံနက်ပိုင်းတွင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့ရှိ RADISSON Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပါဝင်တက်ရောက်သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey Kuzhugetovich Shoigu၊ စစ်ဘက်၊ အရပ်ဘက်မှ အကြီးအကဲများ၊ နိုင်ငံပေါင်း ၆၇ နိုင်ငံမှ အကြီးအကဲများ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာကြသူများက Rosoboronexport ကုမ္ပဏီ နှင့် အခြားကုမ္ပဏီများမှ ခင်းကျင်းပြသထားသည့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများအား လေ့လာကြည့်ရှုကြသည်။
ညီလာခံအား စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသမ္မတ Vladimir Putin ပြောကြားသည့် (၉)ကြိမ် မြောက်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ (Moscow Conference on International Security-2021(MCIS-2021)) အမှာစကား video ကို ဖွင့်လှစ်ပြသသည်။ ယင်းနောက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား သည်။
ထို့နောက် ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Colonel General Alexander V.Fomin ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးပြီး ရုရှားဖက်ဒရေး ရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး Army General Valery GERASIMOV၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ Colonel General WEI FENGHE၊ ကာတာနိုင်ငံမှ Deputy Prime Minister and Minister of Denfece ဖြစ်သူ Dr.Khalid Bin Mohammad AL-ATTIYAH၊ ဘီလာရုစ်နိုင်ငံမှ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Viktor KHRENIN၊ President of the international Committee of the Red Cross ဖြစ်သူ Peter MAURER၊ အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံမှ သမ္မတဟောင်း Khamid KARZAI တို့က သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ် များအလိုက်၊ ကဏ္ဍ အလိုက် ဆွေးနွေးကြပြီး ညီလာခံ မတက် ရောက်နိုင်သူများက Online မှ တစ်ဆင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသည်။
ထို့နောက် ညီလာခံအား အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ပြုလုပ်ရာ ဒုတိယပိုင်း မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က“ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွင် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသ အရေး အား ဆွေးနွေးခြင်း(The Asia-Pacific Region in the Context of Global Politics)” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးသည်။
ဆက်လက်ပြီး မော်ဒိုက်နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး Mr. Hassan ZAMEEL၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအမျိုးသားကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး Senior Lieutenant General PHAN VAN GIANG၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Sheikh AASINA၊ ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံမှ ကာ ကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr. Halbi YUSSOF တို့က သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များအလိုက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ဆွေးနွေးမှုနှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တို့အား သီးခြားဆက်လက်ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။